မြစ်ထဲမှာဘုတ်စီးလို့ရပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မြစ်ထဲမှာဘုတ်စီးလို့ရပြီ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Feb 13, 2012 in Photography | 28 comments
ဟိုတနေ့ကရွာထဲမှာပြောနေကြတဲ့ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာ မော်တော်စီးချင်ကြတဲ့ရွာသူရွာသား အပေါင်းတို့ကိုဒီပိုစ့်ကလေးနဲ့ဆန္ဒ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးကတော့ ဟိုနေ့တုန်းက ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းရောက်တုန်း ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာစီးလို့ရတဲ့ အပျော်စီးမော်တော်လေးကပ်ထားတာမြင်လို့ မေးကြည့်လိုက်တော့ မြစ်ဝကို အပျော်စီးတဲ့ဘုတ်ကလေးလို့သိရပါတယ်။ ၃ ထပ်ပါပါတယ်။ တပါတ်ကို ၃ ရက်ထွက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တယောက်ကို ၃၀၀၀ ကျပ်ပေးရတယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ ည ၇ နာရီထွက်ပြီး ပင်လယ်ဝထိသွားတယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ မြစ်ထဲကိုလှေစီးချင်ကြတဲ့ သူများစုပြီးအပျော်စီးလို့ရပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းရုံးမှာလက်မှတ် ၀ယ်လို့ရတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရရင်တော့ ထပ်ပြောပေးပါ့မယ်။ ဇင်ယော်လေးတွေလဲအစာကျွေးလို့ရပါတယ်။
ကွန်မကောင်းလို့မနက်မိုးလင်းကတဲကတင်တာ။ အခုညမှ ၄ ပုံပဲရတယ်။ နောက်မှကျန်တာလေးတွေထပ်တင်ပေးပါမယ်။
လူ ၁၀၀၀ လောက်ဆံ့တယ်ပြောတယ်။ သိပ်တော့မသချာဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၃ ထပ်ဆိုတော့တော်တော်တော့ဆံ့မှာပါ။
ပုသိမ်သူ .. သုည တစ်လုံးများပိုသွားလား … ၁၀၀၀ ဆိုရင်တော့ စီးရဲဘူး . လိုင်းကားထက် ဆိုးသွားမယ် .. ၀ီစီမူတ်ခံထိနေဦးမယ် … :grin:
ကျွန်မလဲမသိဘူး။ အဲဒီနားက နောင်နောင်သည်ကိုမေးကြည့်ရတာ။ သူကပြောလို့ ၁၀၀၀ ဆိုတာ။ ကျွန်မတို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်လို့ပြောခဲ့သေးတယ်။ သူကတော့ ၃ ထပ်တောင် အမရဲ့ဆိုပြီးပြန်ငြင်းနေတာ။ ဆိပ်ကမ်းကအမတစ်ယောက်ကိုသေချာအောင်မေးခိုင်းထားတယ်။ သိရရင်ထပ်ပြောပါမယ်။
တော်ကြာ သများစီးတုန်း ဖမ်းသွားရင် ဒုက္ခ
ဖမ်းသွားလဲမိုက်တယ်။ တချိုသဘောင်္သားတွေဆိုအဲမှာတအိုးတအိမ်တောင်ဖြစ်နေဆိုပဲ။ လူပျိုကြီးတွေစွန့်စားသင့်တယ်ထင်တာပဲ။ ( အချွန်နဲ့မလိုက်ပြီ )။
တိုက်တိုင်းတော့နစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ချက်ကောင်းတိုက်မှပါ။ ဟီဟိ
တစ်ခါလောက်တော့ စီးကြည့်ချင်သေးတယ် … ပင်လယ်ဝအထိပဲဆိုတော့ ခဏလေးပဲ စီးရပြီး ၃၀၀၀ ပေးရမှာ မတန်သလိုပဲ …. လူ ၁၀၀ လောက်တင်မယ်ဆိုတော့လဲ တော်တော်ကြပ်မယ့်ပုံပဲ …
ပင်လယ်ဝကို စက်လှေနဲ့သွားဖူးတယ် … လှိုင်းနဲနဲရှိတယ် …
စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘယ်လို စုံစမ်းရမလဲ သိချင်တယ် ပုသိမ်သူရေ။
နောက်တစ်ခါ ရွာ့အစည်းအဝေးပွဲ လုပ်ဖို့ နေရာတွေ့သွားပြီ
(ပြီးမှ သဂျီးဆီကို ဘီလ်တင်ရမယ်။)
လန်း လှချည် လား။ နှစ်ယောက်တည်း ပဲ စီးချင်ပါတယ် ဗျာ။
ရတယ်။ ကြိုက်သလောက်စီးကျသလောက်ရှင်း။ ဟင်းဟင်းဟင်း
သဲနုလေး ကို အကူအညီတောင်းဦးမယ်နော
ပုံမြင်တာနဲ့ တင် စီးချင်လို့ ပါကွယ်
တစ်ယောက် ၃၀၀၀ ဆိုတော့ မဆိုးဘူးနော်..
စီးဖူးတယ်ရှိအောင်တော့ သွားစီး မှပဲ …
ကျေးဇူးနော် ခုလိုပုံလေးတွေတင်ပေးလို့ ….
TNA ရေ..သတင်းမှားနေပြီထင်တယ်နော်….အဲဒီ ဘုတ်က လူ၂၀ – ၃၀ ထက်ပိုဆံ့မှာမဟုတ်ဘူး…ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကတွေ့ဖူးတာ…အဲဒီတုန်းက လူတွေအနားကပ်ကြည့်ကြလို့
အပေါ်မတက်အောင် crime scene လိုပဲကြိုးနဲ့ကာထားလို့ တက်ကြည့်လို့မရခဲ့ဘူး…
ရန်ကုန်ကသူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ private ဘုတ်ပါ… အရင်တုန်းကတော့ စဉ့်အိုးတန်းဆိပ်မှာ
၃၀၀၀ ပေးဆီးရတဲ့ အပျော်စီးသဘေ်ားရှိတယ်…နာဂစ်မိသွားလို့အခုမရှိတော့ဘူး…
အသေးစိပ်သိလို့ရှိရင် ပြောပြပါအုံး..တကယ်စီးလို့ရတယ်ဆိုရင် သွားစီးချင်လို့ပါ…
မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ စီးလို့ရတယ်တဲ့။ ဘယ်နှစ်ယောက်ဆံ့လဲတော့အတိအကျမသိပေမဲ့ ကျွန်မသွားတာ စနေနေ့။ ဒီနေ့ထွက်မှာလားလို့မေးတော့သာကြာနေ့ကထွက်လို့စနေမှာ မထွက်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ မမှားလောက်ဘူးမှတ်တာပဲ။ သူတို့ကအတိအကျပြောတာ။ မဟုတ်ပဲနဲ့တော့ပြောမှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး။ သေချာမေးထားပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းရုံးမှာလက်မှတ်ဝယ်လို့ရတယ်လဲပြောပါတယ်။
အခုကတော့လူတွေတက်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်မကဓါတ်ပုံရိုက်ချင်နေတာနဲ့ရယ်။ လှိုင်းလှုပ်နေတာရယ်နဲ့မတက်ခဲ့တာပါ။ ဓါတ်ပုံထဲမှာဒီတိုင်းတက်ထိုင်နေတဲ့လူတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။
အိုကေ။ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။ ရောင်းကောင်းနေတယ်။ တကယ်ဆိုရင်တော့ဆိပ်ကမ်းကို ကော်မရှင်တောင်းမှဖြစ်တော့မယ်။ ဟီဟိ
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး စီးတောင် စီးချင်လာပြီ
3000 ဆိုတော့ ဈေးကလည်းမဆိုးဘူးပဲ
ဒါပင်မယ့် လူ 1000 ဆိုရင်တော့ မစီးရဲဘူး ………………
ချစ်သည်းနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ငှားစီးမယ်.. :smile:
အပေါ်ထပ်မှာလေတဟူးဟူးနဲ့ ပုလင်းလေး မော့လိုက်ရရင်တော့…
အို…၃၀၀၀ နဲ့ရမရ..အဆင်ပြေရင် စုံစမ်းပြီး တင်ပေးပါဦးဗျ..
မေးထားပါတယ်။ အဲဒီအမလိုက်ဖမ်းနေတာ။ လူကြီးမင်းနဲ့ပဲတွေ့နေလို့။ မှာထားခဲ့ပါတယ်။ သိရရချင်းတင်ပေးပါ့မယ်။
အစ်မသဲနုအေးရေ .. လူစုပြီး တစ်ရက်လောက်သွားစီးရအောင်နော် … ။ ဒါနဲ့ …. အသက်ကယ်ဖို့ ပစ္စည်းတွေရော အဲ့ဒီဘုတ်ပေါ် လူစေ့စာ ပါပါ့မလား တော့ စိုးရိမ်မိတယ် … ။
သုံးထောင်ဆိုတာကတော့ .. ပေးပျော်ပါတယ် … ညဘက်လေတဖြူးဖြူးမှာ ရေရိုက်ခတ်သံလေးတွေလည်း ကြားနိုင်မယ် … ခဏတာ အမောတွေလည်း ပြေလျှော့စေမယ်ဆိုလျှင် … သုံးထောင်တောင် ပိုတန်နေသေးတယ် … ။
သေချာအောင်မေးပြီးရင်ကျန်တဲ့ပုံတွေနဲ့ထပ်တင်ပါမယ်။ အခုလောလောဆယ်အဲဒီအမက လူကြီးမင်းဖြစ်နေလို့။ မိအောင်ဖမ်းလိုက်အုံးမယ်။